Prezdantiin Kooriyaa Kaabaa Kim Jong Un Chaayinaa daaw’ataa kan jiru tahuu gabaafame - NuuralHudaa
COVID-19 UPDATE MAY 31,2020
Majlisni Naannoo Somaalee Sanada Hoggantoota Majlisa Federaalaa irraa Dhoksaan dhiyaate balaaleefate
Ministeerri Fayyaa Sa’aa 24 dabre keessa qoronnoo geggeefameen namoota 95 irratti vaayirasiin koroonaa argamuu beeksise
Donald Tramp hariiroo Ameerikaan Dhaabbata Fayyaa Addunyaa waliin qabdu hunda addaan kutuu beeksise
Namoota Itoophiyaatti COVID-19’n qabamuun isaanii mirkanaawe jidduu 661 magaalaa Finfinnee irraa tahuu ibsame
Lammiileen Itoophiyaa Kuweet irraa deebifamuuf iddoo tokkotti walitti qabaman “haala yaaddeessaa keessa jira” jadhan
Ityoophiyaa keessatti lakkoofsi namoota Vaayirasii Koroonaatiin qabamuu mirkanaahee 968 gahe
Suudaan hidhattoonni Ityoophiyaa daangaa ce’uun loltoota isii irratti haleellaa raawwatuu beeksiste
Magaalaa Miniyaapolisiitti Ajjeechaan Poolisni nama adii, nama gurraacha irratti raawwate Mormii Cimaa kaase
Ministeerri Fayyaa Sa’aa 24 dabre keessa qoronnoo geggeefameen namoota 100 irratti vaayirasiin koroonaa argamuu beeksise
Home/Odeeyfannoo/Eeshiyaa/Prezdantiin Kooriyaa Kaabaa Kim Jong Un Chaayinaa daaw’ataa kan jiru tahuu gabaafame
Prezdantiin Kooriyaa Kaabaa Kim Jong Un Chaayinaa daaw’ataa kan jiru tahuu gabaafame
Prezdaant Kim Jong Un affeerraa Prezdantii Chaayinaa Shii Jinping irraa dhihaateen daaw’annaa guyyaa sadihiitiif hara’a Beejing kan seene tahuu gabaafame. Haaluma kanaan hoggantoonni biyyoota lamaanii Beejiing keessatti marii milkaawaa tahe kan gaggeessan tahuu ejensiin Odeeyfannoo Chaayinaa Shinuwaan gabaase. Hoggantoonni lamaan sagantaa Niwukilarii Kooriyaa Kaabaa irratti kan mari’atan tahuu gabaasni kun ni mul’isa.
Chaayinaa fi Kooriyaan kaabaa hariiroo diinagdee fi Siyaasaa cimaa tahe kan qaban yoo tahu, daaw’annaan ammaa kunis prezdaantiin Kooriyaan Kaabaa marii prezdaantii Ameerikaa waliin yeroo lammaaffaatiif gaggeessuuf karoorfate dursuun, Prezdantii Chaayinaa mariisisuuf akka tahe xiinxaltoonni siyaasaa ibsan.
Prezdaant Kim Jong-Un eega bara 2011 taayitaa qabatee asitti imalli gara biyya birootti godhe ifatti hin beekamu. Haata’u malee prezdaantichi bara dabres dhoksaan Chaayinaa daaw’achuun isaa gabaafamee ture.
Chaayinaa Kooriyaa Kaabaa
May 31, 2020 sa;aa 7:00 pm Update tahe